Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6.2 nampanan-karena nanontany hoe
Na dia mety ho mahafantatra ny korontana,-karena nanontany hoe mety ho mahery.
Ny fomba hafa ho fiatrehana ny incompleteness nomerika soritry tahirin-kevitra dia ny hampanan-karena azy amin'ny fanadihadiana mivantana angon-drakitra, ny dingana izay nampanan-karena hiantso aho manontany. Ohatra iray ny nampananana harena nanontany hoe dia ny fianarana ny Burke and Kraut (2014) , izay voalaza teo aloha, ao amin'ny toko (sampana 3.2), mikasika ny fifandraisany amin'ny Facebook na mampitombo namana hery. Raha izany, Burke sy Kraut mitambatra Ny valin'ny fandinihana natao tamin'ny vatan-kazo Facebook angon-drakitra.
Ny toerana izay Burke sy Kraut dia niasa tao, anefa, dia midika fa izy ireo dia tsy maintsy hiatrika zava-manahirana roa lehibe izay nampanan-karena nanontany mpikaroka manao face. Voalohany, raha ny marina miara-mampifandray ny angon-drakitra milentika-a dingana antsoina hoe rakitsoratra linkage, ny mifandraika ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny iray dataset amin'ny mety firaketana an-tsoratra ao amin'ny hafa dataset-dia mety ho sarotra sy diso-mora (ho hitantsika ohatra ny olana eto ambany ity ). Ny olana lehibe faharoa ny nampananana harena nanontany hoe dia ny toetra ny nomerika soritra dia matetika ho sarotra ny mpikaroka mba hijery. , Ohatra, indraindray ny dingana amin'ny alalan'ny izay no nanangona ny format manan-tompo, ary mety ho mora ny maro ny olana voalaza tao amin'ny Toko 2. Amin'ny teny hafa,-karena nanontany hoe dia matetika diso anjara-mora fifandraisana ny fanadihadiana ny mainty-boaty angon-drakitra loharanom-tsy fantatra kalitao. Na dia eo aza ny ahiahy fa ireo zava-manahirana roa hampahafantatra, azo atao ny fitondran-tena zava-dehibe izany fikarohana tetika araka izay nampiseho ny Stephen Ansolabehere sy Eitan Hersh (2012) ny fikarohana amin'ny fomba fifidianana any Etazonia. Izany hoe manana ny lanjany ny hita io nianatra tao amin'ny antsipirihany satria maro ny paikady izay Ansolabehere sy Hersh lasa ilaina ho amin'ny fampiharana ny nampanan-karena nanontany hoe.
Voter taham-pahavitrihana no betsaka ny momba ny fikarohana ao amin'ny siansa ara-politika, ary ao ny lasa, mpikaroka: 'fahatakarana izay vato ary nahoana no ankapobeny no miorina amin'ny fanadihadiana ny valin'ny fandinihana natao. Ny fifidianana any Etazonia, na izany aza, dia tsy mahazatra fitondran-tena amin 'izany firaketana an-tsoratra ny governemanta raha olom-pirenena tsirairay dia nifidy (mazava ho azy, ny fitondrana tsy an-tsoratra izay vato ho an'ny olom-pirenena tsirairay). Nandritra ny taona maro, ny fitondram-panjakana ireo rakitsoratra ireo fifidianana hita ao amin'ny taratasy teny, niparitaka ao amin'ny governemanta eo an-toerana isan-karazany birao manerana ny firenena. Izany no nanao azy sarotra, fa tsy azo atao, fa ny mpahay siansa ara-politika mba manana sary tanteraka ny mpifidy sy ny mampitaha izay lazain'ny olona ao amin'ny fanadihadiana momba ny fifidianana ny tena fifidianana fitondran-tena (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Nefa, izao ny fifidianana ireo rakitsoratra efa digitized, ary maro ny orinasa tsy miankina no nanangona sy natambatra amin'ny fomba fifidianana ireo rakitsoratra hamokatra feno tompony fifidianana antontan-taratasy an-tsoratra ny fifidianana izay fitondran-tena ny Amerikana rehetra. Ansolabehere sy Hersh niasa tamin'ny anankiray amin'ireo orinasa-Catalist LCC-in mba hampiasa ny tompony fifidianana rakitra mba hanampy hampitombo tsara kokoa sary ny mpifidy. Koa, satria niankina tamin'i nomerika firaketana nangonina sy notsongain'ilay mpanoratra ny orinasa, dia nanolotra maromaro tombony ny teo aloha ny mpikaroka ezaka izay efa natao raha tsy misy ny fanampiana ny orinasa sy ny fampiasana Analog firaketana.
Toy ny maro ny soritry ny nomerika loharanom-baovao tao amin'ny Toko faha 2, ny Catalist rakitra tompony dia tsy ahitana be ny isan'ny mponina, attitudinal, ary ny fitondran-tena vaovao izay Ansolabehere sy Hersh ilaina. Ankoatra ny vaovao ity, Ansolabehere sy Hersh no tena liana amin'ny fampitahana nilaza pifidianana fitondran-tena ho nanan-kery pifidianana fihetsika (izany hoe, ny vaovao ao amin'ny Catalist banky angona). Noho izany, ny mpikaroka nanangona ny tahirin-kevitra izay tiany ao anatin'ny fifidianana ny Cooperative Kongresy Fianarana (CCES), fanadihadiana ara-tsosialy lehibe iray. Manaraka, ny mpikaroka dia nanome ity angon-drakitra an'i Catalist, sy Catalist nanome ny mpikaroka Hiverina any amina natambatra angona tahiry izay tafiditra kery ny fifidianana ny fitondran-tena (avy Catalist), ny tena-nitatitra ny fifidianana ny fitondran-tena (amin'ny CCES) sy ny isan'ny mponina sy ny toe-tsaina ny namaly (avy CCES ). Amin'ny teny hafa, Ansolabehere sy Hersh nampanan-karena ny fifidianana tahirin-kevitra amin'ny fanadihadiana tahirin-kevitra, ary ny vokatry natambatra rakitra Manampy azy ireo hanao zavatra izay tsy afaka rakitra tsirairay.
Amin'ny karena ny Catalist angona tompony rakitra amin'ny valin'ny fandinihana natao, Ansolabehere sy Hersh tonga tao fanatsoahan-kevitra manan-danja telo. Voalohany, ny-tatitra ny mifidy dia miely patrana: Efa ho ny antsasaky ny tsy mpifidy nitatitra fifidianana. Na, fomba iray hafa ny mijery izany raha misy olona mifidy ny tatitra, misy ihany ny 80% vintana fa nifidy izy ireo raha ny marina. Faharoa, ny-tatitra dia tsy kisendrasendra; over-tatitra mahazatra kokoa eo avo-karama, tsara-nahita fianarana, mpitolona izay mirotsaka amin'ny raharaham-bahoaka. Amin'ny teny hafa, ny olona izay tena mety ihany koa hifidy tena mety ny mandainga momba ny fifidianana. Fahatelo, ary indrindra manakiana, noho ny mitohy toetra maherin'ny-tatitra, ny tena fahasamihafana eo amin'ny mpifidy sy ny tsy-mpifidy dia kely noho izy ireo vao hiseho avy amin'ny fanadihadiana. Ohatra, ireo manana mari-pahaizana bachelors tokony ho 22 isan-jato no hevitra azo inoana kokoa ny mitatitra ny fifidianana, fa 10 isan-jato ihany no hevitra azo inoana kokoa ny tena fifidianana. Ankoatra izany, misy ny harena ara-teoria ny fifidianana dia betsaka kokoa amin'ny mialoha izay mitatitra ny fifidianana noho izay tena vato, ny empirical fitadiavana olona izay miantso ny teoria vaovao mba hahatakatra sy milaza fifidianana.
Kanefa, tena isika no tokony hatoky ireo valiny? Tsarovy ireo vokatra miankina amin'ny fifandraisana diso-mora ny boaty mainty-tahirin-kevitra amin'ny tsy fantatra dia be fahadisoana. More manokana, ny vokatra miankina amin'ny voka-dingana manan-danja roa: 1) ny fahafahan'ny Catalist mba manambatra ny maro angon-drakitra mahaleotena sy loharanon hamokatra marina datafile tompony sy 2) ny fahafahan'ny Catalist mba mampifandray ny valin'ny fandinihana natao ho any ny tompony datafile. Dingana tsirairay ireo dia tena sarotra sy ny fahadisoana amin'ny dingana na mety hitarika ny mpikaroka any amin'ny fanatsoahan-kevitra diso. Na izany aza, na fanodinana sy ny tahirin-kevitra mifandraika no mitsikera ny mbola fisian'ny Catalist ho toy ny orinasa ho toy izany koa vola loharanon-karena eo amin'ny famahana ireny olana ireny, matetika amin'ny mizana fa tsy misy olona na ny vondrona akademika mpikaroka ny mpikaroka dia afaka mitovy. Ao amin'ny vakiteny mbola any amin'ny faran'ny toko, dia milazalaza ireo olana ireo amin'ny an-tsipiriany sy ny fomba Ansolabehere sy Hersh manao hatoky ny vokatra. Na dia ireo tsipiriany ireo manokana ny fianarana ity, olana mitovy ireo dia hitsangana ny mpikaroka hafa te-manana rohy mankany amin'i mainty-boaty dizitaly soritry angon-drakitra loharanom-baovao.
Inona no lesona mpikaroka ny ankapobeny dia afaka manovo avy amin'io fianarana? Voalohany, misy vidiny lehibe avy karena dizitaly soritra amin'ny valin'ny fandinihana natao. Faharoa, na dia ireo aggregated, angon-drakitra ara-barotra loharanom-baovao tsy tokony heverina ho "tany ny fahamarinana", indraindray izy ireo dia mety ho ilaina. Raha ny marina, dia tsara indrindra ny mampitaha ireo loharanom-baovao angon-drakitra tsy ho tanteraka fahamarinana (avy izay foana tsy mahatratra). Kosa, fa tsara ny mampitaha azy ireo amin'ny hafa angon-drakitra misy loharanom-baovao, izay manana fahadisoana foana ihany koa.